१४९ जनाको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदा योभन्दा ठूलो आधार के हुन सक्छ ? : अधिवक्ता बन्दी Nepalpatra १४९ जनाको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदा योभन्दा ठूलो आधार के हुन सक्छ ? : अधिवक्ता बन्दी
१४९ जनाको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदा योभन्दा ठूलो आधार के हुन सक्छ ? : अधिवक्ता बन्दी
काठमाडौँ । अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले १३६ सांसदको समर्थन भए प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत पुग्ने भएपनि १४९ जनाको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदा यसभन्दा ठूलो आधार के हुन सक्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले हालेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा शुरु भएको बहसमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
अधिवक्ता बन्दीले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर शीर्षनेता राष्ट्रपतिको पुगेको पनि ठूलो आधार भएको बताए । उनले धारा ७६ (३) अनुसार संसद्को विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्री ७६ (५) अनुसार कसरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् र ? भनेर पनि प्रश्न गरेका छन् ।
धारा ७५ (५) को सरकारले मात्र संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने भन्दै उनले संसद् विघटन पनि असंवैधानिक भएको बताए । सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले धारा ७६ (५) मा जानका लागि ७६ (४) अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने हो र भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
बहसमा अधिवक्ता बन्दीले ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा राखि राख्नका लागि ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत नलिएर मार्गप्रशस्त गरेको भनेको बताए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संविधान उल्लङ्घन गर्न उद्यत देखिएको भन्दै उनले संविधानको रक्षाका लागि पनि प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको माग गरे ।
#१४९ जनाको हस्ताक्षर